पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो - info4nepal
काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। पछिल्लो चार महिनामा पेट्रोलियम पदार्थमा करिब पाँचपटक भएको मूल्य वृद्धि चौतर्फी आलोचना भएपछि मूल्य घटाइएको हो।
अहिले साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि घटेको जानकारी दिएको हो। निगमले पेट्रोलमा तीन रुपयाँ मूल्य निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले जानकारी दिए। भारतबाट मूल्य घटेर आएका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइएको उनले बताए।
यस्तै डिजेल र मट्टितेलमा २/२ रुपयाँ मूल्य घटेको छ। यसअघि डिजेल र मट्टितेलको मूल्य ९५/ ९५ थियो। २०७१ असोजदेखि स्वचालित मूल्य कायम गरिएको थियो। त्यसपछि १९ पटक अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेअनुसार १९ पटक घटाएर समायोजन गरिएको छ।
राजिनामा दिएका केसी भन्छन:सेयर गरेर दबाब दिदै मलाइ जनताले साथ दीनुस हत्याराको नाम खोल्दिन्छु ‘निर्मला हत्याको सबै कुरा खोल्दा समाजमा अशान्ति फैलिन सक्छ’ भन्दै मलाइ रोकेका छन् ,सक्दो शेयर गरौ
एक्लै दुई किलोमिटर सडक खनेका चन्द्रबिर वलीलाई खाद्यन्न सहयोग
डाक्टर गोबिन्द केसिलाइ भोट कसरी हाल्ने ? कृपया सक्दो शेयर गर्नुहोला र आफू पनि भोट दिनुहोला
अपराध र ठगीमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिँदै कम्युनिस्ट सरकार
तपाई त्यो ओली कि यो ओली ?
ranjan December 24, 2018